रोरी स्मिथ - कान्तिपुर समाचार
पूरा भएको अर्को सपना
एक मिनेट बाँकी थियो । सायद त्यो भन्दा पनि कम । अझ केही सेकेन्डभन्दा हुन्छ । अयाक्स युरोपेली च्याम्पियन्स लिग फाइनलबाट टाढा रहेको । तर किन हो, कसरी हो । अयाक्सका खेलाडीले आफूलाई सम्हाल्नै सकेनन् । अयाक्सको भविष्य छ र इतिहास पनि ।
एनफिल्डमा एक अविस्मरणीय रात
लिभरपुलका सबै खेलाडी 'कोप' दर्शकदीर्घा अगाडि उभिए । जसले त्यो खेल खेलेका थिए । जसले त्यो खेल हेरेका थिए, सबैलाई अझ पनि विश्वास भइरहेको थिएन । खेलाडीका हात एकअर्काको काँधमा थियो ।
मोहम्मद सलाहले जे गर्छन्, त्यो अपेक्षितजस्तै हुन थालेको छ । इजिप्टका यी खेलाडीको गोलपछि लिभरपुल फुटबल क्लबको स्टेडियम खुसीले जुरुक्क उठ्ने गर्छ । जुन दर्शकदीर्घा नजिक छन्, त्यसैतिर जान्छन् । हात फैलाउँछन् । उभिएर दर्शकको अभिवादन स्विर्काछन् ।
पेप ग्वार्डिओलाले पूरा दिन गल्फ खेले । रहिम स्टर्लिङ घरको सोफामा आराम गरिरहेका थिए अनि भिन्सेन्ट कोम्पनी आफ्नो परिवारसँग म्यानचेस्टर सिटीको आफ्नै टेलिभिजनमा व्यस्त थिए ।
के बायर्नले लय गुमाएको हो ?
यसअघि र यसपछिको घटनाक्रममा खालि झीनो अन्तर मात्र छ । केही समय अगाडिसम्म बायर्न म्युनिखले प्रशिक्षक कार्लोस एन्सेलोटीमा धेरै थोक देखेको थियो । त्यसैले क्लबको जिम्मा दियो ।
रोरी स्मिथका लेखहरु :
स्थिर छैन खेलाडीको मूल्य
चालू दशकभर अग्रणी प्रिमियर लिग क्लबले सामान्य लाग्ने एक प्रश्नको जवाफ खोज्न हजारौं घण्टा समय र कयौं किलोवाट दिमागीय शक्ति लगाएका छन्– एउटा खेलाडीको खास मूल्य कति भनेर कसरी निधो गर्ने त ?
रियल म्याड्रिडको सुरुआती गालाक्टिकोसले गर्न सकेन । नब्बेको दशकमा जोहान क्रायफले बनाएको बार्सिलोनाले पनि सकेन । २ दशकपछि त्यसैको उत्तराधिकारी भनिने अनि पेप ग्वार्डिओलाद्वारा निर्मित र लियोनल मेसी प्रेरित टोलीको पनि केही लागेन ।
यसमा कुनै मतभेद र विवाद हुने छैन । बार्सिलोनासँग अझै पाँच मिनेट थियो र पेनाल्टीको अवसर पनि । विश्व फुटबलकै सर्वाधिक राम्रा खेलाडी लियोनल मेसी यो सिजन पेनाल्टीबाट चुकेका छैनन् । अझ उनले यसै खेलमा पेनाल्टीबाट नै गोल पनि गरिसकेका थिए, आधा घन्टाअघि ।